दिल निशानी मगर भन्छन ‘रबि मेरा आदर्श हुन’ « Postpati – News For All
दिल निशानी मगर भन्छन ‘रबि मेरा आदर्श हुन’
दिल निशानी मगर । प्रष्टिकरण:- ‘भूलिदिनेलाई- सम्झिदिनेलाई’
रबि लामिछानेको निजी कुरा कसैले नि गरेका छैनन्। उनले आफ्नो निजी कुरा आफ्नै फेसबुक आईडी मार्फत गर्वका साथ सार्वजानिक गरेका हुन्। यदी तपाईहरु फेसबुक वालको ‘पब्लिक अप्सनमा’ केही चिजहरु पोस्ट गर्नुहुन्छ भने ति निजी हुदैनन्। स्वत; समुदायको सम्पती बन्छन्- बहसको बिषय हुन्छन। निजी कुरा गर्नका लागी म्यासेन्जरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले रबिको निजी कुरामा मानिसहरुले चासो दिईरहेका छन् भन्ने ‘चाक’ जस्तो तर्कलाई खण्डन गर्नुपर्छ।
शिर झुक्ने र उठ्ने कुराको कति चर्चित छ, समाजसेवी छ भन्ने कुराले खासै अर्थ राख्दैन। जहाजमा आफ्नै सहकर्मीलाई गरेको भद्दा अपमानले भारतिय हाँस्य सम्राट कपिल शर्मा टाटा पल्टिए। डिप्रेशनमा गए। हिजो सम्म ‘द कपिल सो’ देखेर पेट मिचीमिची हाँस्नेहरु कपिललाई थुक्न थाले। एउटी पोर्न स्टारको बयानले अमेरिकी राष्ट्रपती ट्रम्पको निद हराम गर्यो। मर्दले १० वटी केटी बिहे गर्दा भगवान कृष्णको उपमा पाउने तर मर्दिनीले १० वटा केटा संग बिहे गर्दा किन रण्डी-भालु भन्ने?
श्रिमान-श्रिमतीको एउटा लिगेसीपूर्ण सम्बन्धको कुरा गर्छु। यो स्टाटस पढेर ‘मा चि**ने दिले तँलाई बाँधेर घाँस हाल्छु’ भन्नेहरु बाहेक अरुले यो भाष्य बुझ्न सक्छन्। इमरान खान साहेब पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा उनका पूर्बपत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथले ट्विट गर्दै लेखेकी थिइन-“२२ बर्षको अपमान, अवरोध र बलिदान पछि मेरो छोराको बुवा प्रधानमन्त्री बन्दै छन्। शुभकामना छ तिमीलाई।” हो, डिभोर्स पश्चात ईशाको श्रिमानको रुपमा रहेनन् रबी, भोली रबि देशको प्रधानमत्री भएमा ईशाको छोरीको बुवा नै प्रधानमन्त्री हुनेछन्। र ति छोरीहरु अरु कोही नभएर ईशा र रबिको ‘शुक्रकिट र डिम्बको’ एक प्रतिक हुनेछन्।
म ईशा भाउजुलाई स्याहार्ने पक्षमा कदापी छैन, किनभने ईशाको छोरीहरुले मलाई कुटेर सडकमा पुराउछन्। फेरी दुई थाल भात खाने आदत छ मेरो, उता चिकन बर्गर होला। त्यो बर्गर आन्द्रा मै हराउछ मेरो। हाडनाता नजोडिएका दाईको श्रिमती दाई मरेर गए अथवा गती छाडेर गए स्याहार्ने चलन छ, जनजातीहरुमा। सबै जनजाती हैन। रबि र मेरो हाडनाता हैन। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मैले स्यार्छु भनेको भाउजु ईशा पनि हैन। यो देशमा हजारौ भाउजुहरु छन्, ति सबै भाउजुहरुको गुप्तागंको तिब्र ईच्छा मैले कहाँ पुरा गर्न कहाँ सक्छु र? तर मैले मिना ढकाल भाउजुको नाम प्रयोग गरेर गम्भिर गल्ती गरेकै हो। हुन त उहाँले पनि मिडीयाबाटै पोई त खोज्नुभएकै हो।
सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरु, अनलाईन संचालकहरु मेरो दुईटा शब्द; ‘भाउजु र यार्सागुम्बामा’ ३, ४ महिना सम्म रल्लिएर बस्नुहुन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन। खैर, दिल निशानी मगरले राम्रो भने पनि नराम्रो भनेपनी बिरोध नै गर्नुपर्छ भन्ने ठुलो जमात छ। तिनीहरुले मेरा फोटोको दुरुपयोग गरेका छन्। तिनलाई म स्याबास भन्न चाहान्छु किनभने जसको दिमागमा जती गिदी छ त्यती नै काम गर्ने हो। मेरो कसैका प्रती रिसराग छैन। म संकिर्ण पनि छैन। महात्मा गान्धी र नेल्शन मण्डेलाको बायोग्रफी पढेर बस्ने म यस्ता हगुरे- पादुरे बिषयमा समय खर्च पनि गर्दिन।
हाँसले यौन सम्पर्क गरेको दृश्य नजिकैबाट हेर्न हुदैन भन्ने कुन संबिधानमा लेखेको छ ?